Isitolo esidayisa yonke impahla Truck Boom Pump Umkhiqizi kanye Umhlinzeki | Kalula
Iloli Boom Pump
Imodeli iyunithi 29M 33M 37M
Ubude Jikelele mm 9900 10400 10400
Ububanzi Sekukonke mm 2350 2480 2500
Ukuphakama sekukonke mm 3650 3650 3650
Isisindo Sonke kg 18495 21000 21000
Thoery okukhipha umthamo m3 / h 60/80 60/80 75/118
Ingcindezi kaMax Concrete UMpa 13 / 7.6 / 12/8 12/8 10 / 6.5
Izikhathi zokumpompa kwe-theory ubuncane 23/28 23/28 23/28
Ukhonkolo Isilinda Bore / Stroke mm 200 × 1650 230 × 1600 260 × 1600
Uhlobo lwe-Hydraulic System Vula I-Loop Vula I-Loop Vula I-Loop
Ingcindezi Yesistimu Yokudonsa UMpa 32 32 32
Ivolumu yethangi likawoyela L 550 500 600
Imodeli yeChassis ShanXi / HOWO ShanXi / HOWO ShanXi / HOWO
Isondo Bas mm 5200 5200 5200
Ifomu leDrayivu 4 × 2 4 × 2 4 × 2
Injini Model WP6.220E50 ShanXi / HOWO ShanXi / HOWO
Amandla Enjini KW 162 199 162
Izinga Lokukhishwa I-GB V I-GB V I-GB V
Umthamo we-Fuel Umthamo L 163 163 163
Isivinini esikhulu Km / h 90 90 90
Okuthengiswayo kwethu kuvame ukubonwa futhi kunokwethenjelwa ngamakhasimende futhi kungahlangabezana nezifiso ezikhulayo njalo zomnotho nezenhlalo zamanani aphansi kakhulu e-China 30m Boom Length Concrete Pump Truck for Sale, Ukubheka isikhathi eside, indlela ende okufanele uhambe ngayo, ukulwela njalo ukuba yiyo yonke abasebenzi ngomdlandla ogcwele, ukuzithemba okuphindwe kayikhulu futhi bafaka inkampani yethu yakha indawo enhle, okuthengiswayo okuthuthukile, inkampani enhle yanamuhla esezingeni eliphakeme futhi basebenza kanzima!
Intengo ephansi kakhulu ye-China Truck Mounted Concrete Pump, i-38m Truck Mounted Concrete Pump, Imisebenzi yethu yebhizinisi nezinqubo zenzelwe ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu afinyelela kuhlu olubanzi kakhulu lwezimpahla ngemigqa yesikhathi emincane yokuphakelwa. Le mpumelelo yenziwa yithimba lethu elinamakhono kakhulu futhi elinolwazi. Sifuna abantu abafuna ukukhula nathi emhlabeni wonke futhi bahluke esixukwini. Sinabantu abalamukela kusasa, abanombono, abathanda ukwelula izingqondo zabo futhi baqonde kude kunalokho abebecabanga ukuthi kungafinyeleleka.
Uhlelo lokulawula i-1.Electronic
Uhlelo lwe-elekthronikhi luzenzakalelayo kakhulu futhi lunokwethenjelwa. Futhi amadivayisi amakhulu kagesi avela eSchneider.
Uhlelo lokulawula ngogesi lunezinhlobo ezimbili zedivayisi yokulawula: idivaysi yokulawula ibhodi nedivayisi yesilawuli kude esingenantambo, ezihambisana nezici zokusebenza okulula, ama-ergonomics asebenziseka kalula, nokubukeka okuhle. Lapho, amadivayisi wesilawuli kude angenantambo angamadivayisi wesilawuli kude i-Apollo.
Uhlelo lokulawulwa kwe-elekthronikhi lunamadivayisi amaningi wokuxwayisa angaqinisekisa ukuphepha okuphezulu ngenkathi kusebenza imishini.
Uhlelo lweBoom lususelwa kufomu ledatha elinembile ukuhlaziywa kwezinto ezisemaphethelweni, ukuhlaziywa okunamandla nokuhlolwa.
Uhlelo lweBoom lukhiqizwa ngensimbi engenamandla ephezulu ene-titanium alloy steel. Yonke impahla kanye nezinsimbi zayo kudlula ukuhlolwa okungonakalisi okungu-100% ukuqinisekisa ukuphepha nokwethembeka kwe-boom.
I-boom ifakwe uhlelo lokulawula olunemisebenzi yokunxeshezelwa kwengcindezi nokuzwa umthwalo. Futhi i-boom emise u-R ingashintshwa kumabanga amahlanu wejubane. Ngakho-ke ukuqhuma kungagijima ngejubane elifanele futhi kungaqhutshwa kahle.
Ikesi lokudlulisa yidivayisi esabalalisa amandla wenjini. Ingadlulisa ifomu yamandla injini ku-chassis ukuze amandla avela enjini eyengeziwe enziwe, futhi amandla angalondolozwa asetshenziswe kahle.
Idizayinelwe ukuhlaziywa kwezinto ezincane, i-hopper inamandla, inamandla, futhi inokuqina kobukhulu. Ngenxa yalokhu, impilo yokusebenza kwepompo ukhonkolo ne-piston kungalulwa.
Umklamo omise okwe-arc we-hopper ungagwema amakhona angaboni. Ngenxa yalokhu, ukusebenza kwayo kokudluliswa kokhonkolo kungathuthukiswa, futhi ukuvama kokuvinjelwa kokhonkolo kungancishiswa.
I-shaft evuselelayo kanye ne-outlet emise okwe-S nomhlangano omncane wokuphela uhlelwe kabili, ukuvimbela izingxenye ukuthi zingonakalisi futhi zivinjwe usimende.
Idivayisi ye-valve engu-5.Multi-way
Amanani wezindlela ezahlukahlukene kakhulu wokulayisha asetshenziselwa ukuthuthukisa ukuzinza ngesikhathi sokusebenza kwe-boom.
Langaphambilini WZ40-28 Deluxe Backhoe Loader
Olandelayo: Udizili Trailer Ukhonkolo Pump HBT30.06.75R